Fifindra-monina: hisy fandefasana horonantsary manokana | NewsMada
Fifindra-monina: hisy fandefasana horonantsary manokana
Manomboka manaitra izao tontolo izao ny resaka fifindra-monina misy sy miha mahazo vahana tato ho ato. Firenena miady, olona mijaly, fahantrana, sns, samy antom-pisiany avokoa ireo. Inona marina moa ny zava-misy mianjady amin’ireny mpifindra monina ireny?
Hotanterahina eto amintsika, ny 10 desambra izao, ny “Festival du film sur la migration”, na hetsika iray natokana tanteraka ho an’ny karazana horonantsary mikasika ny fifindra-monina. Mikarakara izany ny sampan’ny Firenena mikambana misahana ny fifindra-monina na ny OIM.
Eny amin’ny Mozea an’ny saripika, eny Andohalo no hanatanterahana ny fandefasana ireo horonantsary. Marihina fa samy hisy fandefasana sarimihetsika avokoa ireo efitra dimy ao amin’ity mozea ity, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro hatramin’ny 9 ora alina. Miisa 14 ireo horonantsary malagasy sy vahiny.
Hetsika fanaon’ny OIM isan-taona ny “Festival international du film sur la migration” ka andiany fahatelo ny amin’ity taona ity. Natomboka tamim-pomba ofisialy, ny 28 novambra teo tany Genève Soisa, izany. Manerana ny firenena 100 ny hetsika, toy ny eto Madagasikara, ka hibahan-toerana amin’izany ny fandefasana horonantsary momba ny fifindra-monina.
Tanjon’ity “festival” ity ny hanentana ny olona tsy hanao tsinontsinona ireo mpifindra-monina tsy fidiny, miaina fahasarotana, indrindra amin’ny lafiny sosialy. Ampahafantarina mandritra ny hetsika ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra (ODD) mikasika ny fifindra-monina. Tsy inona izany fa ny fanamorana ny fifindra-monina am-pilaminana, tsy mitera-doza ary tompon’andraikitra.